आजको राशिफल -
प्रदेश १प्रदेश २प्रदेश ३गण्डकी प्रदेशप्रदेश ५कर्णाली प्रदेशसुदुरपश्चिम प्रदेश
ज्योतिषी दुर्गा भण्डारी ।
वि.सं.२०७६ साल भाद्र १९ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०१९ सेप्टेम्बर ०५ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । दक्षिणायन । वर्षा ऋतु । श्रीशाके १९४१ । भाद्र शुक्लपक्ष । तिथि सप्तमी,५१ घडी ०३ पला,रातको ०२ बजेर १० मिनेट उप्रान्त अष्टमी । नक्षत्र विशाखा,११ घडी ४३ पला,बिहान १० बजेर २६ मिनेट उप्रान्त अनुराधा । योग वैधृती,४९ घडी ०५ पला,रातको ०१ बजेर २२ मिनेट उप्रान्त विष्कुम्भ । करण गर,दिउसो ०२ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त वणिज,रातको ०२ बजेर १० मिनेट उप्रान्त भद्रा । आनन्दादिमा प्रवद्र्ध योग । चन्द्रराशि बृश्चिक । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर ४४ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर १९ मिनेट । दिनमान ३१ घडी २६ पला । भक्तपुरस्थित मंगलकुण्डमा मेला। अगस्ति उदय –काठमाडौं समान २७ं।४२’ उत्तरी अक्षदेशमा) ।
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) :- व्यास्तता बढेपनि स्वास्थ्यको ख्याल नगर्दा कमजोरि महसुस हुनेछ । खानपान तथा बाहिरी बाताबरणको ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा लगानि गर्नुपुर्व आवस्यक तयारि राम्रो सँग गर्नुहोला । पढाई लेखाईमा मन नजादा भनेजस्तो नतिजा नआउँन सक्छ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि आजको दिन मध्ययम रहेकोछ । गोप्यता भङग हुने तथा आफन्त सँग बिवाद बढ्नेछ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो):- जीवनसाथिको सहयोगले राम्रा तथा उपलब्धिमुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । बन्द व्यापार फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै शिलशिलामा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जाने तथा खोजिमुलक क्षेत्रबाट भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ । सवारि साधन तथा बिलाशी सामान हातलागि हुने योग रहेकोछ ।
मिथुन(का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा):-पढाई लेखाईमा सहपाठिहरुलाई किनारा लगाउँदै एक कदम अगाडि बढ्न सकिनेछ । नोकरिमा हुने प्रतिष्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ । पुराना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हल भएर जानेछ भने ऋणबाट मुक्त हुन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ भने पति पत्निबिच बिश्वास बढेर जानेछ । अफिसियल यात्राको गतिलो योग रहेकोछ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) :- पढाई लेखाईमा मन जाने तथा भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेमको डोरो कसिलो हुनेछ भने बिभिन्न बस्तु तथा उपाहार प्राप्त हुनेछ । व्यावसायकै सवालमा रमाईलो यात्रा गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउँनेछ । बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्र फराकिलो हुनेछ भने तपाईको प्रश्तुतिले सबैको मन आकर्शित गर्नेछ ।
सिहं (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) :- राजनिति तथा सामाजिक काममा समय दिएपनि न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउँनु पर्नेछ । व्यापार व्यावसायमा भनेजस्तो नाँफा नभएपनि कृषि तथा पशुपालन व्यावसायबाट भने मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछि परिनेछ । आमा तथा परिवारका सदस्यहरुसँग मनमुटाब सिर्जना हुनेछ । माया प्रेममा धोका हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) :- प्रतिष्पर्धामा सहभागि हुनु परेपनि प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा हात पार्न सकिनेछ । पराक्रमी क्रिर्याकलापमा भाग लिई नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । लेखन,कला तथा साहित्यमा रुचि बढ्नेछ । प्रेमील जोडीहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ । दाजुभाई तथा आफन्तको सहयोगले व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
तुला(रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते):- व्यापार बढ्नुको साथै आम्दानिमा बढोत्तरिको योग रहेकोछ । पारिवारिक जमघटमा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नुको साथै रमाईलो बाताबरण समय व्यातित गर्न सकिनेछ । गाएन तथा कलाकारिता क्षेत्रमा समय लगानि गर्नेहरुले नाम तथा दान दुवै कमाउँन सक्नेछन् । साझपख यात्राको गतिलो योग रहेकोछ भने न्यायिक निर्णय तपाईकै पक्षमा हुनेछन् ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) :- राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन हुने तथा समयमा काम गर्न सकिने हुनाले ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । सुचना प्रबृधिको प्रयोग गरि नयाँ काम गर्न सकिने हुनाले मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईका अलाव खेलकुद तथा अन्य क्रियाकलापमा भाग लिई नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
धनु(ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) :- खर्च बढेपनि उपलव्धिमुलक कामहरु हुँनेछन् । लामो दुरिको विदेश यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ । विदेशि सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने विदेशमा बसेर धन कमाउँन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेकोछ । समयमा कामहरु फत्ते गरि नाम तथा दाम दुबै कमाउँन सकिनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ । पढाई लेखाईमा ध्यान नदिदा अरुभन्दा पछि परिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) :- लाभ भावमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले खनिज पदार्थ तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग मार्फत आम्दानि बढाउँन सकिनेछ । मन पर्ने मायालुका साथ दिनभर समय व्यायित गर्न सकिनेछ । पैत्रिक सम्पतिको प्रयोग तथा परिचालन गरि मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । अग्रजहरुको सहयोगमा सवारि साधन तथा भौतिक सम्पति प्राप्त हुनेछ । प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
कुम्भ(गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा):- सामाजिक काम गर्ने वाताबरण बन्ने तथा मानसम्मान,ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । अध्ययन अध्यापनमा मन जानेछ भने माया प्रेममा प्रिय पात्रसँग नजिक हुने समय रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा लगानि गरि भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । बिवादित बिषयहरु हल भएर जाने तथा पुराना समस्याअरु केहि भए थोरै समय दिएर फत्ते गर्न सकिनेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) :- सामाजिक तथा परोपकारि काममा समय व्यातित हुनेछ । सरकारि स्तरबाट हुने कामहरु समयमा सम्पादन हुने हुनाले नया काम गर्न जोस जागर आउँनेछ । शिक्षाकै सवालमा लामो दुरिको यात्रा हुने प्रसस्त सम्भावना रहेकोछ । आफन्त तथा घरपरिवारका सदस्यहरुका साथ धार्मिक यात्रामा निस्कन सकिनेछ । अध्ययन तथा खोजमुलक काममा मन जाने योग रहेकोछ ।
प्रकाशित मिति : बिहिबार, भदौ १९, २०७६
नेकपाको प्रदेश क्षेत्र इन्चार्ज बनिन् पत्रकार तथा गायिका ओली
एक सय पैतिस घरपरिवारलाई खानेपानी सुविधा
प्रतिनिधिसभामा सांसदले प्रश्न सोध्ने प्रर्यटन मन्त्रीले जवाफ दिने
सुनको टवाइलेट चोरी भयो
बिनु बनिन् मिस गुरुङ इन्टरनेशनल
लोपोन्मुख जिब्रो छेड्ने जात्रा अनिश्चित
मन्त्री योगेशको घट्नामा कलाकार पनि बोले, हेरौँ के भने
भगौडा भन्नेलाई दिपकको जवाफ, ‘जय हिन्द’
सोलुखुम्बुमा उडिरहेको हेलिकप्टरबाट सिरकको पोका झरेपछि….
गृहमन्त्री हुन त यस्ता, आफ्नै भाइलाई पनि छाडेनन्
चिनियाँ सेनाले भारतिय सेनालाई नियन्त्रणमा लिएपछी..
सुनकोशी नदि सिन्धुलीमा डुबेर एक जना बेपत्ता
कास्की क्षेत्र न‌ं २ मा वामदेव र रवीन्द्र मिश्र चुनाव लड्दै!
नेपाली भाषामा टुइट गर्दै मोदीले के भने ?
इलाम पुगेर प्रचण्डको खुलासाः प्रधानमन्त्री बन्न अफर
डेंगु नियन्त्रणमा महाअभियान जरुरी
प्रेस काउन्सिल दर्ता नं : २१०९/०७४/०७५
सगुन सौगात मिडिया प्रा.लि, कोटेश्वर-३५, काठमाडौँ
सम्पर्क : ९७७-०४७-५२१०९५
मोवाईल सम्पर्क: ९८४०४८३६५५, ९८४४०४५८६७, ९८१२०१६४०२, ९८१४८३५०३६
© 2019 and all right reserved Sinduli Saugat